Chineke Ọ̀ Na-anụ Ekpere Niile Ndị Mmadụ Na-ekpe? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Urdu Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Chineke na-anụ ekpere ndị mmadụ na-ekpegara ya n’agbanyeghị ebe ha si. (Abụ Ọma 145:18, 19) Okwu ya, bụ́ Baịbụl, gwara anyị ka anyị kọọrọ ya ihe ọ bụla na-echegbu anyị. (Ndị Filipaị 4:6, 7) Ma, e nwere ekpere ndị na-anaghị adị Chineke mma. Dị ka ihe atụ, ekpere ndị mmadụ bu n’isi na-ekpe ugboro ugboro anaghị amasị Chineke.—Gụọ Matiu 6:7.
Ihe ọzọkwa bụ na Jehova anaghị anụ ekpere nke ndị kpachaara anya na-enupụrụ ya isi. (Ilu 28:9) Dị ka ihe atụ, n’oge Baịbụl, Chineke ekweghị aza ekpere ndị Izrel gburu ọchụ. O doro anya na o nwere ihe ndị anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Chineke na-anụ ekpere anyị.—Gụọ Aịzaya 1:15.
Gịnị ka anyị kwesịrị ime ka Chineke na-anụ ekpere anyị?
Anyị kwesịrị inwe okwukwe na Chineke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ nụ ekpere anyị. (Jems 1:5, 6) Anyị ga-ekwetasi ike na Chineke dị nakwa na ọ hụrụ anyị n’anya. Anyị nwekwara ike ime ka okwukwe anyị sie ike. Otú anyị ga-esi eme ya bụ na anyị ga na-amụ Baịbụl n’ihi na ọ bụ ihe ndị anyị na-amụta na ya ga-eme ka anyị nwee ezigbo okwukwe.—Gụọ Ndị Hibru 11:1, 6.
Anyị kwesịrị ịdị umeala n’obi ma jiri obi anyị niile na-ekpegara Chineke ekpere. Ekpere Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs, kpegaara Chineke gosiri na ọ dị umeala n’obi. (Luk 22:41, 42) N’ihi ya, anyị kwesịrị ibu ụzọ mata uche Chineke tupu anyị agwawa ya ihe anyị chọrọ ka o meere anyị. Otú anyị ga-esi amata uche Chineke bụ ịmụ Baịbụl. Anyị mee otú ahụ, ekpere anyị ga na-adaba n’uche Chineke.—Gụọ 1 Jọn 5:14.
Ekpere Ihe Mmadụ Kweere na Otú E Si Efe Chineke